အသံလွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း - - FloSports တွင်-တည်နေရာဗီဒီယို Capture နှင့်မျှဝေခြင်းများအတွက်ကြီးထွားလာလိုအပ်နေသောူပည်သူသည် TVU ကွန်ယက်ရွေးချယ် NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » အသားပေး » FloSports ကြီးထွားလာတွင်-တည်နေရာဗီဒီယို Capture များအတွက်လိုအပ်နေသောူပည်သူနှင့်မျှဝေခြင်းသည် TVU ကွန်ယက်ရွေးချယ်
စက်ဘီး: စပိန် 72 / အဆင့် 2017 ခရစ္စတိုဖာ FROOME (GBR) အနီရောင်ခေါင်းဆောင်ဂျာစီ / Johan Esteban CHAVES (COL) အဖြူရောင်ပေါင်းချုပ်ဂျာစီ / Alberto CONTADOR (ESP) / Hellin ၏ 8nd ခရီးစဉ် - Xorret က de Cati ။ ကော်စတာ Blanca ပြည်ထဲရေး 915m (199,5km) /, La Vuelta / ရေကူးကန် LG / (Getty Images ကနေတစ်ဆင့်တိက de Wael / Corbis နေဖြင့်ဓာတ်ပုံ)
FloSports ကြီးထွားလာတွင်-တည်နေရာဗီဒီယို Capture များအတွက်လိုအပ်နေသောူပည်သူနှင့်မျှဝေခြင်းသည် TVU ကွန်ယက်ရွေးချယ်
, On-တည်နေရာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ video capture နှင့်ခွဲဝေမှုများအတွက်ကြီးထွားလာလိုအပ်ချက်နှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့် On-demand အားကစားလွှမ်းခြုံတဲ့တိကျခိုင်မာစွာ 24 /7အချိန်ဇယားနှင့်အတူ FloSports, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဒစ်ဂျစ်တယ်အားကစားနှင့်မူရင်းအကြောင်းအရာအတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုရွေးချယ်တော်မူပြီ TVU ကွန်ယက် ဒါကြောင့်ဗီဒီယို-ကျော်-IP ကိုနည်းပညာပံ့ပိုးပေးမယ့်အဖြစ်။ FloSports တိကျခိုင်မာစွာကိုဗီဒီယိုအကြောင်းအရာတောင်းဆိုချက်များနှင့်အတူ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းကိုဖြတ်ပြီးတစ်နှစ်လျှင် 10,000 တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှပြိုင်ပွဲကျော်စီးနေထိုင်ကြသည်။
အတူ FloSports '' ယခင်အောင်မြင်သောငှားရမ်းအတွေ့အကြုံကို TVU ကွန်ယက်'' ပစ္စည်းကိရိယာများ, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်သော့ခတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချအတွက်ဆုံးဖြတ်ခြင်းအချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ FloSports များအတွက်အပြီးသတ်ထုတ်လုပ်မှုဖြန့်ဝေဖြစ်ရပ်များ simulcast မှ TVU ကိုအသုံးပြုသည်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဝေးလံသောနေရာများကနေပရိုဂရမ်းမင်း, ကုန်ကြမ်းသိမ်းဆည်းပစ္စည်းများအတွက်စံချိန်ရိုက်ကူးနှင့်ပိုပြီးထုတ်လုပ်ပေးသည်။ တစ်ဦးအဖြစ် backup လုပ်ထား, FloSport TVU တစ်ခုမှာအသုံးချ ဆယ်လူလာမိုဘိုင်းယူနစ် သေချာစေရန်တိုင်းနေရာမှသူတို့ကအမြဲတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလွှမ်းခြုံနှင့်လွှမ်းခြုံမကျိုးပေးနိုင်ပါသည်။
"ကျနော်တို့ကလက်ရှိနှစ်ဦးစလုံးမူလတန်းနှင့် backup လုပ်ထားဖြစ်ရပ်လွှမ်းခြုံများအတွက် TVU အသုံးပြုနေသည်" FloSports ထုတ်လုပ်မှုအဲရစ် Helton ၏ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကတခြားကိုဗီဒီယို-over-IP ကိုပံ့ပိုးပေးရာမှပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသုံးပြုပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကကင်မရာကိုဆယ်လူလာဆက်သွယ်မှုအတွက်အတက်အကျဖြစ်ပေါ်စေနိုငျသော, တစ်ဦးသင်တန်းဖြတ်ပြီးအားကစားသမားတွေနဲ့ရွှေ့ဖို့ရှိပါတယ်ဘယ်မှာလက်ဝါးကပ်တိုင်တိုင်းပြည်များကဲ့သို့ဖြစ်ရပ်များဖုံးအုပ်ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါဘူး။ ဆနျ့ကငျြဘတှငျကြှနျုပျတို့ TVU တစ်ခုမှာလွှမ်းခြုံဤအမျိုးအစားများအတွက်အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်တွေ့ရှိ, ကြှနျုပျတို့ပိုကောင်းရလဒ်တွေကိုခံစားခဲ့ရသညျ။ ထို့အပြင် TVU ရဲ့ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုသည်အခြားပံ့ပိုးပေးခွငျးအားဖွငျ့ပူဇျောပါထောက်ခံမှုထက်သာလွန်သည်။ "
FloSports တသမတ်တည်းမသက်ဆိုင်အားကစားသို့မဟုတ်နေရာ၎င်း၏ကြည့်ရှုရန်အရည်အသွေးမြင့်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့် On-demand လွှမ်းခြုံကယ်တင်တတ်၏။ IS + TVU ရဲ့စီးပွားဖြစ်ထုတ်လွှင့် algorithm ကိုတို့က Powered, TVU က transmitter တစ်ပြိုင်နက်ဆယ်လူလာ 3G / 4G LTE ကို, Wi-Fi, Ethernet, Ka-band နှင့် Ku-band အပါအဝင် bandwidth ကိုနတ်ကတော်မဆိုပေါင်းစပ်စုပေါင်းနိုင်ပါတယ် ဂြိုဟ်တု0.5 စက္ကန့်ကဲ့သို့အနိမ့်ခွဲဒုတိယအောင်းနေချိန်, နှင့်အတူတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အားကိုးထုတ်လွှင့်ရုပ်ပုံလွှာကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ, မိုက်ခရိုဝေ့, မိုက်ခရိုဝေ့ကွက်နှင့် BGAN ။
"TVU ထုတ်ကုန်များ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်မှီခိုရိုးရာအသံလွှင့်၏ကန့်သတ်တွန်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖွ" Helton ကဆက်ပြောသည်။ "ဒီနည်းပညာကကုန်ကျစရိတ်နှင့်အချိန်ထိရောက်သောကိုယ်တိုင်ကသက်သေထူခြင်းနှင့်အပြစ်ကင်းစင်စွာအခါတိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်သိရသည်။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုတွေ့ပြီမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ TVU ရဲ့အစိုင်အခဲစွမ်းဆောင်ရည်ဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှု၏ FloSports မော်ဒယ်, ငါတို့၏ကတိကဝတ်ခိုင်မာစေနှင့် အိုင်ပီကိုဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်ထုတ်လွှင့်များ၏အနာဂတ်ဖြစ်၏။ "
ယင်းထက်ပို 2,500 နိုင်ငံများတွင် 85 ဖောက်သည်ကျော် TVU ကွန်ယက် IP ကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်၏မိသားစုထုတ်လွှင့်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများအွန်လိုင်း, ထုတ်လွှင့်နှင့်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းမှတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာဖြန့်ဝေဖို့အစွမ်းထက်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလုပ်ငန်းအသွားအလာပေးသည်။ TVU အများအပြားအဓိကမီဒီယာအဆောက်အဦများ၏စစ်ဆင်ရေး၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်သွားရမှဖြစ်ပါတယ်ဖြေရှင်းချက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအိုင်ပီ, ဆည်းပူး transmit, ထုတ်လုပ်ရန်, စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေရန် HD သတင်း, အားကစားနှင့်အဓိကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များအတွက်ရိုက်ကူး။ အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက TVU ကွန်ယက် ဖြေရှင်းချက်, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.tvunetworks.com.
"FloSports '' စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယို Over-IP ကိုနည်းပညာ၏ချိုမြိန်အစက်အပြောက်အတွင်းဿုံကိုက်ညီ" TVU ကွန်ယက် ဒုတိယသမ္မတမြောက်အမေရိကအရောင်း Matt Keiler ကဆိုသည်။ "ဒီအားကစားသူတို့အဆက်မပြတ်ဒေသမူကိုပြောင်းလဲမြန်ဆန်ရွေ့လျားနေသည့်အကြောင်းအရာများနှင့်အတူမကြာခဏဆယ်လူလာမရှိဘဲသို့မဟုတ်မတည်မငြိမ်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူစိန်ခေါ်မှု enviroments မှာဝေးလံသောထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ဖုံးလွှမ်းပြီးကနျ့ဘတ်ဂျက်။ ကျနော်တို့ကိုသူတို့အသည်းအသန်ကြည့်ရှု၏သူတို့ရဲ့သန်းပေါင်းများစွာမှယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုအားကစားအကြောင်းအရာရောက်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းပညာကိုရှေးခယျြထားပြီးပြီစိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်။ "
TVU ကွန်ယက်®အိုင်ပီ-based တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုအားဖြေရှင်းချက်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုက IP-based အခြေခံအဆောက်အအုံမှ - ရှာမှီး, ဂီယာ, လမ်းကြောင်း, ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ပါဝင်သည်ရာ - TVU ရဲ့ဖြေရှင်းချက်ထုတ်လွှင့် '' SDI-based စစ်ဆင်ရေးအသွင်ပြောင်းကူညီပေးသည်။ TVU®သတင်းထုတ်လွှင့်, ကို web streaming များ, တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး, အားကစား, ကော်ပိုရိတ်နှင့်အစိုးရတို့ပါဝင်သည်ကြောင်းစက်မှုလုပ်ငန်းကနေထက်ပိုမို 85 နိုင်ငံများရှိလူအပေါင်းတို့အရွယ်အစား၏ဖောက်သည်များဆောင်ရွက်ပါသည်။ ယူအက်စ်အေ, တရုတ်နှင့်အခြားအဓိကစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာတဝှမ်းထုတ်လွှင့်စျေးကွက်မှာတော့TVU®က၎င်း၏ IP ကိုဗီဒီယိုကဖြေရှင်းချက်ကို အသုံးပြု. အားလုံးသတင်းထုတ်လွှင့်ဘူတာ၏ကြီးမားသောအများစုနှင့်အတူကြီးစိုးစျေးကွက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏စီးပွားဖြစ်နည်းပညာဖြစ်၏အသုံးပြုခြင်း, TVU ရဲ့ uplink ဖြေရှင်းနည်းများ, ဆယ်လူလာမဆိုပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သည် ဂြိုဟ်တုတိုက်ရိုက်လွှကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ, မိုက်ခရိုဝေ့, Wi-Fi နှင့် Ethernet IP ကိုဆက်သွယ်မှု HD လက်တွေ့ကျကျဆိုတည်နေရာမှဗီဒီယို။
FloSports, စစ်မှန်တဲ့ပရိတ်သတ်တွေဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြကြောင်းအားကစားလွှမ်းခြုံ၏လောကဓာတ်သော့ဖွင့်ဖို့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဒစ်ဂျစ်တယ်အားကစားနှင့်မူရင်းအကြောင်းအရာ, အလောင်းတွေအုပ်ချုပ်ဖြစ်ရပ်အခွင့်အရေးများကိုင်ဆောင်သူနှင့်အတူမိတ်ဖက်, နှင့်အခြားမီဒီယာကုမ္ပဏီများတွင်တီထွင်ဆန်းသစ်။ ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ရပ်များ, မူရင်းဗီဒီယိုပရိုဂရမ်များနှင့်အပတ်စဉ်စတူဒီယိုပြပွဲ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ streaming များမှတဆင့် FloSports, ထိုဖြစ်ရပ်များသည်အားကစားသမားများ, နှင့်ပရိတ်သတ်များအတွက်အားကစားကြီးထွားလာနေပါတယ်။ အဆိုပါ FloSports header ကိုအောက်မှာလက်ရှိဒေါင်လိုက်နပန်း, ရပ်ဘီ, MMA မှ, ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ, Track, ကျွမ်းဘား, ဟော်ကီနှင့်ထို့ထက် ပို. ပါဝင်သည်။
ထုတ်လွှင့်ဘိသည့် 2019 ၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ဖြစ်ပါတယ် NAB ပြရန် Las Vegas မှနှင့်များ၏ထုတ်လုပ်သူအတွက် NAB ပြရန် LIVE ။ 2018 ခုနှစ်, NAB ပြရန် တိုက်ရိုက် 1.3 သန်းအွန်လိုင်းကြည့်ရှုကျော်နှင့် 2019 စဉ်အတွင်းလက်ခံရရှိ NAB ပြရန်ကျနော်တို့ 1.5 သန်းကြည့်ရှုကျော်လွန်ရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား	2019-02-07
ယခင်: "ဒီလုပ်ငန်းအသွားအလာပြရန်" Podcasts ၏ Chesapeake ကြေညာချက်များပြန်လည်စတင်
နောက်တစ်ခု: မာရီယာ Psyhogios Testronic အမေရိကတိုက်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် & ရုပ်မြင်သံကြားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပို့ဆောငျဖို့